ဩစတြေးလျနိုင်ငံရှိ ပြည်နယ်တစ်ခုတွင် နေ့စဉ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု မြင့်မားနေသည့်ကြားမှ ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးနှံထားသော ဒေသခံများအား ပိုမိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးမည် - Xinhua News Agency
ဆစ်ဒနီ၊ ဩဂုတ် ၂၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၏ လူဦးရေးအထူထပ်ဆုံး New South Wales ပြည်နယ်က ဩဂုတ် ၂၆ ရက်၌ နေ့စဉ် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ၁,၀၀၀ ကျော်ဖြင့် စံချိန်တင် များပြားနေသော်ငြားလည်း လာမည့်လတွင် ကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ် ထိုးနှံထားသော ဒေသခံများအား ပိုမိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။အဆိုပါ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် နိုင်ငံ၏ COVID လမ်းပြမြေပုံ၏ ပထမခြေလှမ်းလည်းဖြစ်ပြီး ပြည်နယ်အတွင်း ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုရည်မှန်းချက် ၆ သန်း ပြည့်မီသွားပြီးနောက် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း NSW အစိုးရက ဩဂုတ် ၂၆ ရက် ထုတ်ပြန်ချက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။ ပြည်နယ်၏ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း ရည်မှန်းချက်အသစ်များဖြစ်သည့် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း ပြည့်မီချိန်တွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထားသူများအတွက် နောက်ထပ်လွတ်လပ်ခွင့်များကို လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်မှစ၍ သက်ဆိုင်ရာ ဒေသခံအစိုးရနယ်မြေ ၁၂ ခုပြင်ပ၌ နေထိုင်သူများအတွက် ၅ ဦးအထိ (ကလေးများနှင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံ အပြည့်အဝထိုးနှံထားသူ လူကြီးများ အပါအဝင်) နေအိမ်ပြင်ပလူစုဝေးခြင်းများကို ယင်းလူပုဂ္ဂိုလ်၏ ဒေသခံအစိုးရနယ်မြေအတွင်း သို့မဟုတ် နေအိမ်မှ ၅ ကီလိုမီတာအတွင်း ခွင့်ပြုပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သက်ဆိုင်ရာ ဒေသခံအစိုးရနယ်မြေ ၁၂ ခုပြင်ပ၌ နေထိုင်သူများအတွက် လူကြီးများအားလုံး ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးသည့် အိမ်ထောင်စုများအနေဖြင့် ရှိနှင့်ပြီးသား စည်းမျဉ်းများအတွင်း ပျော်ပွဲစားထွက်ခြင်း အပါအဝင် အပန်းဖြေအတွက် နေအိမ်ပြင်ပတွင် စုဝေးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ရန် တစ်နာရီ ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် အစိုးရက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ဖွင့်ရေးနှင့် COVID ဘေးကင်းစိတ်ချရသောနည်းလမ်းဖြင့် လည်ပတ်ရေး ပြင်ဆင်ရန် ဆောင်ရွက်ထားမှုကို လာမည့်လာများအတွင်း စက်ရုံများ၏ စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်မှုများအပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
လမ်းပြမြေပုံတွင် ဖော်ပြထားထား ဓာတ်ပုံများဖြင့် ဆွဲဆောင်ထားသည့်ကြားမှ ကူးစက်မြန် ဒယ်လ်တာ (Delta) ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၏ နောက်ဆုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှုအများဆုံး၏ ဗဟိုချက်ဖြစ်သော NSW ၌ ဒေသတွင်း ရောဂါကူးစက်မှုအသစ်မှာ ဩဂုတ် ၂၆ ရက်တွင် ၁,၀၂၉ ဦးရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် အသက် ၃၀ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦး၊ အသက် ၆၀ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့် အသက် ၈၀ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း NSW ကျန်းမာရေးဌာနက သတင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
ဒေသတွင်း ရောဂါကူးစက်မှု အရေအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကြောင့် ယခုသီတင်းပတ်ကုန်တွင် ကုန်ဆုံးမည့် NSW ဒေသတွင်း လော့ခ်ဒေါင်း (lockdown) ဆောင်ရွက်မှုအား စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက် ညသန်းခေါင်းအထိ သက်တမ်းတိုးလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်တွင်လည်း ဩဂုတ် ၂၆ ရက်၌ ဒေသတွင်းရောဂါဖြစ်ပွားသူအသစ် ၈၀ ဦးရှိခဲ့ရာ လက်ရှိရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွင် စံချိန်တင်မြင့်မားခြင်းဖြစ်သည်။ (Xinhua)
Aussie state gives more freedom to residents fully vaccinated despite highest daily case increase
SYDNEY, Aug. 26 (Xinhua) — Australia’s most populous state of New South Wales will give more freedom to residents being vaccinated with two doses in next month despite its daily COVID-19 cases increase stood atarecord high of over 1,000 on Thursday.
The NSW government said inastatement on Thursday that the decision was made after the state hit the target of6million jabs, which is also the first step of the state’s out of COVID roadmap. Further freedoms will follow for those who have had the jab when the state hits new vaccination targets of 70 percent and 80 percent.
From Sept. 13, for those who live outside the 12 local government areas of concern, outdoor gatherings of up to five people (including children and adults fully vaccinated) will be allowed inaperson’s local government area or within five km of home.
The government is also investigating trials of certain industries in coming months, asaproof-of-concept measure to prepare the businesses to open up and operate inaCOVID-safe way, the statement said.
Despite the tempting picture outlined in the roadmap, NSW, as the epicenter of Australia’s latest outbreak triggered by highly infectious Delta variant, recorded 1,029 new locally acquired cases on Thursday.
The NSW Health also reported three deaths, includingaman in his 30s,aman in his 60s, andaman in his 80s.
The lockdown in regional NSW that was due to end this weekend has been extended to midnight Sept. 10, because of ongoing concern about the number of local transmission.
At the same time, the state of Victoria reported 80 new local cases on Thursday, alsoarecord high in the current outbreak. Enditem
Photo taken on June 26, 2021 showsawoman doing physical exercise nearaCOVID-19 testing center in Sydney, Australia. (Xinhua/Bai Xuefei)